Maalinta: Sebtember 13, 2017
Wadada Magaalada Destzce ee Wadada 'Dhismaha Wadada Wadnaha' ee Wadada Wadada Tareenka Nostalgic waxay bilaabeen inay xiraan biraha. Tram kaasoo ka socda halka isgoyska Istaanbuul ee Atatürk Boulevard uu ku sii jeedo 15 Luulyo Martyrs Park [More ...]
Mashruuca Wadada Tareenka Sare ee Ankara-Sivas, daraasaddu waxay ku bilaabatay iyada oo aan jirin daraasado ku filan, waxay horseedday isbeddelo qaybo ka mid ah mashruuca. Dhererka ilaa mitirrada 32 iyo qoto dheer oo gaadha mitirrada 80 ee jidka la soo maray waa Yerköy-Sivas [More ...]
Waaxda Kheyraadka Aadanaha ee TCDD waxay soo saartay amar ku saabsan wareejinta shaqaalaha TCDD taariikhda 12.09.2017 iyo lambar E.374600. Amarka, nidaamka wareejinta ee shaqaalaha TCDD; nidaamka iyo mabaadiida [More ...]
Cadaadiska Argaggixisada ee Gaadiidka Dadweynaha ee Kayseri
sii wado Kayseri degmada Metropolitan ee Turkey ugu horeeyay, in-guriga qalabka si ay u awoodaan in ay si degdeg fara si raxan xun ayaa isku diyaarinaya badhan argagax 'in la keeno. Waxaad magacaabay shaqada horyaal kula Turkey Kayseri degmada Metropolitan, [More ...]
TCDD 3. Agaasimaha Gobolka Selim Koçbay, Isuduwaha Gobolka TCDD Gaadiidka Aegean Müslüm Yurdakul, Rugta Wershadaha ee Balikesir oo ay soo qaban qaabisay Xarunta Saadka ee Gökköy ayaa ka qeyb gashay kulanka wada tashiga. Dekadda, kastamyada iyo shirkadaha saadka [More ...]
Stone-Mahmutbey Metro lahaa Pride Turkiga
22,5 kiiloo mitir Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro, oo ka mid ah mashaariicda metroga ugu weyn ee Istanbul, waxay gashay 2017 ugu dambeysa ee ka mid ah mashruucii ugu horreeyay ee 32 oo ka mid ah mashruucii 145 ee ka qeybqaatey AX Excellence Awards ından, oo ka mid ah tartamada ugu muhiimsan adduunka adduunkiisa. in tartanka [More ...]
Zeytinoğlu, ali Waxaan jeclaan lahaa in aan aado ganacsiga gawaarida gawaarida ee Zeytin
Isagoo ka hadlayey shirkii golaha Kocaeli Rugta Wershadaha ee Sebtember, Madaxweynaha KSO Ayhan Zeytinoğlu wuxuu yidhi, öner Waxaan soo jeedinaynaa adeeg la mid ah gaadiid-doon oo udhaxeeya Değirmendere Yüzbaşılar iyo orodka Körfez ee udhaxeeya Harem iyo Sirkeci. Waqtigaan [More ...]
Havaray 'waxay ka baxdaa dooxada
Cityscape Global 2017, oo loo tixgeliyo mid ka mid ah kulamada ugu muhiimsan ee dhismaha iyo qaab-dhismeedka adduunka, ayaa albaabadeeda ka furtay Dubai. Magaalada 'Globalscape Global 2017', oo loo tixgeliyo mid ka mid ah dhismayaasha ugu muhiimsan ee dhismaha iyo qaab-dhismeedka adduunka, ayaa ku sugan Dubai [More ...]
Abaabulka soo saarida gudaha iyo kan qaranka ee magaalada warshadaha ee Bursa
Thanks to dhowr mashruuc oo Bursa, adduunka ganacsiga iyo Dowlada Hoose ay hogaamisay, 10 waxay caan ku noqotay wax soo saarka gudaha iyo qarank sanadkii la soo dhaafay. Magaalada, marinka dhulka hoostiisa mara ee ugu horreeya, taraamka ugu horreeya ee guriga, gudaha [More ...]
Xalka mashiinka dhibaatada baarkinka ee Antalya
Dowladda Hoose ee Magaalaweynta Antalya waxay hirgelinaysaa garoon gawaarida gawaarida ee ugu horreeya ee Antalya. Baarkinka mashiinka dabaqa ah ee leh xayndaabka xNUMX awoodda lagu rakibay aagga ka soo horjeedka dhismaha Plaza 2000. [More ...]
RayHaber 13.09.2017 Warbixinta Shirka
Hagaajinta Wadooyinka Adeegga Jirta ee u dhexeeya Polatlı-Konya HHT Line Line 1 Km 139 + 000-174 + 050 Hagaajinta Wadooyinka Adeegga Jirta ee u dhexeeya Khadka Konya-Karaman KM: 84 + 500 - 88 + 700 Waxay Sameyn doontaa Alwaaxyo Yaryar [More ...]
Wasiir Arslan: Yay Waxaan bilaabay inaanu adeegsanno hababka gaadiidka caqli-celinta ah ee Bakanaan
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta, wuxuu cadeeyay in shuruudaha baabuurta adeegga iskuulka lagu kireysan karo lagu xakameynayo Sharciga Adeegga Gawaarida Dugsiga. [More ...]
1 saacadaha bilaashka ah ee garoonka diyaaradaha ee ISPARK
Garoomada diyaaradaha ee Magaalada Istanbul ISPARK, Ataturk iyo Sabiha Gokcen waxay bixin doonaan adeeg xamuul saacad ah oo 1 bilaash ah. Qiyaastii ku dhawaad ​​3 kun oo 500 gawaari ah ayaa laga furay meel u dhaw garoonka diyaaradaha İSPARK, Sabiha Gökçen iyo Atatürk Airport [More ...]
3 Carabiya oo doonaya in ay gurigooda qaataan. Madaarka
waalan mashruuca u duuli doono Turkey ahayd diiradda dareenka oo ka mid ah maal-gashadayaasha ajnabiga. maal-Arab doonayay in guryaha, gaar ahaan dalka Turkiga waxaa si dhow ula socda mashaariic Rafaa garoonka saddexaad sida ee Istanbul oo Channel. Deganaanshaha Guri [More ...]